Igama Ukubhula negama patronymic e isiko amaVeda
Ukubhula njengoba enzeka iye kabanzi lendlala phakathi kwezizwe ezahlukene. Ngaphezu kwalokho, ngumkhuba namasiko lasendulo ukuze ngisho cishe abonisa lapho efika kithi engenakwenzeka.
Omunye wemithombo zokuqala amaVeda uhlelo izenzo lapho wonke izigaba zakhelwe ngokuphelele zemilingo izinombolo. Njengoba entshonalanga, futhi ohlelweni amaVeda lwamagama ukubhula ngokuvamile waqinisekisa ngokusebenzisa izinhlobo ezahlukene kokusebenza kuzinombolo izinhlamvu amagugu. Lokhu kuyaqondakala, ngoba, njengoba umthetho, abantu eyaziwa futhi samoidentifitsiruemy ngokuyinhloko ngegama lalo noma egameni layo.
Isici yesiko amaVeda, wukuthi ngokuvamile uphuzwe ukucabangela igama lokuqala nesibongo ndawonye, ngesikhathi esifanayo. Ukuchaza lokhu, futhi, ulula, kusukela ezikhathini zasendulo igama amaNdiya savela igama efanele futhi clan (clan), ngakho-ke kwathiwa bazitshela ukuthi ngala mazwi amabili amanga ukugxila ikusasa labo siqu futhi ezinikele ngofuzo. Kamuva, njengoba Upanishads ukusho lamagama ungeze elinye igama, okwakuwuphawu isidlaliso noma, noma isidlaliso ukuthi wanikwa umuntu njengesenzo isikhundla sakhe emphakathini noma ukuqashelwa isimo sakhe emphakathini. By the way, leli siko sekuneminyaka eYurophu, isibonelo eRoma yasendulo, lapho izakhamuzi enhle kakhulu baklonyeliswa amalungelo igama kathathu - Lucretius, noGayu Yuliy Tsezar, ngamunye okuhambelana ukubaluleka kukhonjisiwe ngenhla.
Ngakho, i-inqubo elingu, sithola amazwi ezintathu - igama, isibongo kanye patronymic.
Ngo vedistov umthelela la mazwi abonisa ngayo ukuthi ngamunye, ukuthi, kwelinye icala, umuntu ingabizwa kuphela ngegama, nezinye - ngegama, wesithathu - kwi patronymic. Futhi uma ukubhula igama lokuzalwa usuku vele iqukethe izinombolo eluhlaza, isiko amaVeda kudinga isabelo sokuqala amanani ezinombolo yamagama-amagama.
Ngo vedistov igama ukubhula, isibongo, igama phakathi livela ukuqashelwa jikelele wokuzalwa womuntu - samsara, okuyinto kuphawuleka lokuthi ngalunye umjikelezo ngokulandelana zokuphila iqukethe okuthile kulowo odlule futhi idluliselwa komunye umjikelezo kwenye ngosizo vibration isiphetho - karma. Lezi kunyakaza ziyabonakala iqiniso lokuthi igama lomndeni idlulisa phetho zofuzo yokhokho bakho. Igama efanele - elifanekisela asebenzayo futhi intando yakho siqu kuleli zwe. Patronymic - yokwenziwa, ke zonke lezi zilo sifanekisela ukuluthwa wakho olandelayo nezici.
igama amaVeda ukubhula, isibongo, avelele patronymic "Isibalo Imiphefumulo" futhi "Destiny Inombolo." Lezi zinombolo bazimisele nesibongo. Ikakhulu ke kubhekwa "ngenani lamagama." Ithola ukuzwana nabantu yomuntu, isibonelo, phakathi amaNdiya kubonakala yokuthi igama lomyeni wayo kwanezelwa igama likamakoti emva komshado.
ukubaluleka Omkhulu unamathele vedistami futhi uhlamvu lokuqala egameni. Le ncwadi, noma kunalokho inani layo karmic ezihlobene ngokuqondile Rashi - yayo ohambelana Zodiac uphawu, noma nge Nakshatra - ohambelana incwadi yokumisa.
igama ukubhula amaVeda, isibongo, patronymic siqokomisa umehluko ukuthi khona phakathi kwabantu futhi lapho kunqunywa silinganiso / inombolo obungavamile amagama. Labo abanamasheya ngisho inombolo, njengoba umthetho, abantu ziyimfihlakalo, onekhono, zithambekele umsebenzi zefilosofi bohemian. Abanikazi of the inombolo engalingani - okungukuthi, ukuzinyeza, amakghonwabo ngokuvamile kufihlwe, ethule, lawa abantu okumele "ukuvula".
Lo muntu igama lakhe, njengoba sekuphawuliwe kakade, iqukethe, futhi likhipha kunyakaza kanyekanye. Kubalulekile ukuthi lezi kunyakaza zivumelana. Lokhu kungenziwa bahlola a Ukuqhathaniswa harmonic izinombolo okuhambisanayo Soul Igama Destiny.
Harmony phakathi kuqala, futhi eyesibili kudala izimo esihle sokuthuthukiswa ubudlelwane zobungane ukwazana. Ngaphezu kwalokho, eziningi amagama kabani isiphetho kuvumelana, uzohlala inkumbulo ezinhle yena nabanye abantu, ngisho nangemva kokufa.
Kodwa, ithi amaVeda igama ukubhula, isibongo, igama phakathi, uma uthola nokungezwani phakathi samagama kanye nenani Imiphefumulo futhi Destiny, kufanele sicabange ngalokho kufanele okushintshile ekuphileni kwakho, futhi ushintshe ngokushesha.
Ngakho uthi isiko amaVeda.
Ukubhula ngokufunda intende: ulayini umshado phezu isandla
Kungani abantu besaba khona inombolo 13?
7. Inombolo ukubaluleka 7. Numerologiya - inombolo phetho 7
Njengoba umkhaya wakithi iphathwa angina amakhambi abantu
Accelerometer: ukuthi kusho ukuthini futhi kusebenza kanjani kwezobuchwepheshe banamuhla?
Osikilidi Electronic Sigelei: kudivayisi ezintsha Viper eziphambili
Olga Gorovaya - Biography nemisebenzi
Yeka indlela okuyingozi kuyinto salmonellosis? ekwelapheni lesi sifo
Tikhonov Victor Jr - inkanyezi entsha ye hockey Russian